Emgba Ọkụ: Ndị dike na-etinye gị n'ihu RPG gbara ọsọ nke Nintendo | Gam akporosis
Ọkụ Ọkụ: Ndị dike, RPG na-eji usoro dị ukwuu sitere na nnukwu Nintendo
El Tọzdee gara aga anyị nwere ọbịbịa nke egwuregwu mkpanaka nke abụọ nke nnukwu Nintendo. Onye mbụ n’ime ha bụ Super Mario Run, ọ bụ ezie na nke a ka bụ naanị maka iOS ruo mgbe wepụtara na gam akporo maka ọnwa nke Machị. Anyị enweghị ọtụtụ ihe fọdụrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ akwa Mario onye na eche anyi Iji nwee ọ enjoyụ na njem gị site na nyiwe ndị a, obi nkoropụ nwere ike ịba. Naanị ihe na-eme bụ na egwuregwu a anatala oké osimiri nke nkatọ maka ọnụahịa nke € 10 nke ọ na-efu iji meghee ọdịnaya ya niile, yabụ anyị ga-ahụ otu o si eweta ha mgbe ọ rutere na gam akporo.
N'oge anyị nwere afọ ojuju na Fire Emblem: Ndị dike, egwuregwu dịnụ naanị na gam akporo na na-ewetara anyị a usoro nke Nintendo utu enịm ke ihe ga-abụ nke dabeere dabeere na-emeri na RPG. Akara Ọkụ: Ndị dike nwere ihe osise ndị ahụ nke ọtụtụ ndị tozuru oke na arụmọrụ oge m na-egwu ya. Ọ na-agagharị nke ọma ma ọ na-egosi na enwere ezigbo aka n'azụ nhazi nke egwuregwu nke abụọ a site na ụlọ ọrụ nkiri akụkọ Japanese nke nyere anyị ọtụtụ awa igwu egwu n'ime iri afọ ole na ole.
1 Akwa akụkọ gbakwunyere egwuregwu egwuregwu
2 Dị iche iche egwuregwu ụdịdị, gụnyere ọtụtụ
Akwa akụkọ gbakwunyere egwuregwu egwuregwu
Fire Emble: Heroes ike adọta uche n'ebe anyị n'ihu na-akpali gameplay na agwakọta RPG na atụmatụ rụrụ ebe a na mgbanwe. Nke a pụtara na ị ga - etinye ndị dike gị na bọọdụ egwuregwu ka ha wee nwee ike ịkwado onye iro ahụ. N'ebe a, anyị nwere nkume, akwụkwọ na mkpa dị n'ụdị anwansi, melee na mbuso agha, n'ihi ya ndị nke a na-eji ụdị a ga-ahụ gị n'ụlọ.
Akụkọ ahụ na-akpọga anyị n'ụwa ebe ike abụọ na-ebikọ ọnụ: alaeze nke Embla, nke na-achọsi ike merie ndị dike nke ụwa ndị ọzọ, yana Alaeze nke Askr, nke na-emegide atụmatụ ya. Anyị ga-egwu na ndị ikpeazụ ga-achọpụta nke ọ bụla n'ime ihe odide ahụ ga-ese ihe ndị dị egwu na ihe omume anyị ga-ahụ na egwuregwu Nintendo nke abụọ a.
Otu n'ime ihe dị iche iche nke Akara Ọkụ: Ndị dike bụ na ka anyị na-agabiga akụkọ, ọ ga-aga na nbudata ihe ohuru, ihe na-enwe ekele ka ọ ghara ichere maka nbudata mbụ ahụ na nke ọma nke na-ewe oge ụfọdụ karịa otu ga-achọ.
Egwuregwu a na-agwakọta ụfọdụ n'ime ndị kacha mara amara sitere na Fire Emblem saga na ụfọdụ ndị ọhụrụ e mere site Onye a ma ama na-ese ihe osise Yusuke Kozaki, bụ onye rụburu ọrụ na Emblem Awakening and Fire Emblem Fates. Nwere ike ịhọrọ ụfọdụ ndị dike a, ebe ndị ọzọ ga-abụ ihe na-eme ka ihe siere gị ike.
Dị iche iche egwuregwu ụdịdị, gụnyere ọtụtụ
Nintendo o kpebisiri ike iji egwuregwu vidio a nke mere na n'ime afọ ahụ ha ga-etinye ozi ọma dịka mmelite oge site na ndị enyi ọhụrụ na ọdịnaya dị iche iche, gbakwunyere ihe nwere ike ịbụ ihe omume. Ọ bụ ezie na ekwenyeghị na nke abụọ a, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume.
Ewezuga akụkọ bụ isi, ị nwere usoro ndị ọzọ ga - enyere gị aka mma gị dike na tụọ onwe gị megide ndị ọzọ Player. Ọ nwere ihe karịrị ihe na-atọ ụtọ na ntanetị ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ maka ọgụ na mgba nke ị ga-enwe ndị agha gị niile n'ụdị kachasị mma.
Ke ofụri ofụri i nwere ike nweta akụkọ ihe mere eme map na-ewe gị tupu ọhụrụ odide na kpara dike; omume ụlọ elu, ebe ị ga-alụ ọgụ na maapụ omume na ị nwere ike ịnweta mgbe ọ bụla ịchọrọ inweta ụgwọ ọrụ na ahụmịhe; coliseum, nke a ga-abụ ebe ị ga - enwe ike ihu ndị egwuregwu si n'akụkụ ụwa niile ka ị nweta akara ndị ọzọ ma duru ndị isi ndu; na nzute, map pụrụ iche nke dị n'oge a kara aka.
Ọkụ Ọkụ: Ndị dike kwere nkwa nke ukwuu na anyị nwere olileanya na Nintendo na-akpa àgwà ma mara otu esi emelite egwuregwu vidiyo kwa oge dịka ọmụmụ ndị ọzọ na - achị egwuregwu ịgba ekwentị na Google Play Store.
Egwuregwu na-aga mma na akụkụ ya niile, na na-atụgharị dabeere na-alụ ọgụ na a nnukwu usoro akụrụngwa, ikike na pụrụ iche ike na-ekpe na-enwu. Ihe osise ndị enyere dị oke mma iji were akụkọ egwuregwu ahụ gaa na ọkwa ọzọ, yabụ na-arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ ya niile.
Ọkụ Ọkụ: Ndị dike
Akwa visual àgwà
Ihe eji eme egwuregwu ma obu agha
Akụkọ ya na Nintendo
More chicha na ọgụ
Fire akara Heroes
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ọkụ Ọkụ: Ndị dike, RPG na-eji usoro dị ukwuu sitere na nnukwu Nintendo
Google nwalere imepụta ohuru nke ngalaba "Ngwa m"